ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငါးမြို့နယ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညမထွက်ရအမိန့် နှစ်လထပ်တိုး - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငါးမြို့နယ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညမထွက်ရအမိန့် နှစ်လထပ်တိုး
စစ်တွေ၊ ဇွန် ၃
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြောက်ဦး၊ ကျောက် တော်၊ မင်းပြား၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းနှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တို့တွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၄ အရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညမထွက်ရအမိန့်ကို နှစ်လထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြောသည်။ ”နောက်ထပ်နှစ်လထပ်မံတိုးလိုက်တာ ဟုတ်ပါတယ်။ လုံခြုံရေးအရ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အနေအထား မရှိသေးလို့ပေါ့” ဟု ၎င်းင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇွန် ၃ ရက်က ပြောသည်။
အဆိုပါငါးမြို့နယ်အတွင်းရှိ အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ လမ်းသွယ်များ၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားများ၊ ဥယျာဉ်ပန်းခြံများ၊ အများပြည် သူနှင့်ဆိုင်သောနေရာများတွင်သွားလာခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းင်းကပြောသည်။ ” ပြည်သူတွေသိအောင် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးတွေက ကြေညာမှာပေါ့” ဟု ၎င်းင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါငါးမြို့နယ်တွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးထိခိုက်ကျဆင်းမှု မဖြစ်စေရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပ ဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ည ၉ နာရီမှ နံနက် ၆ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြို့နယ်ငါးမြို့နယ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၂ ရက်က စတင်၍ ညမထွက်ရအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ညမထွက်ရအမိန့်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မသင်္ကာဖွယ်ရာများပြုလုပ်ပါက ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိကြောင်း တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဒီမိုကရေးစီတူဒေးသို့ ပြောထားသည်။ ညမထွက်ရအမိန့်ကို နှစ်လထပ်တိုးသတ်မှတ်ထားပြီး သြဂုတ် ၂ ရက်ထိဖြစ်သည်။ အလားတူ ARSA အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တောမြို့နယ်တို့တွင်လည်း ညနေ ၁ဝ နာရီမှ နံနက် ၅ နာရီအထိ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်မှာ ယခုအချိန်ထိဖြစ်သည်။
ယခင် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ?
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် လျာထားချက်ထက် ဘီလီယံ ၂၄ဝ ကျော် လျော့နည်းခဲ့သည့် အကြောင်းပြချက် ပျောက??
လစ်ပ်ဇစ် တိုက်စစ်မှူး တီမိုဝါနာကိုသတိပြုရန် ကင်မစ်ခ်ျ တိုက်တွန်း